LineageOS ikozvino inogona kuiswa pane Raspberry Pi 3 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Raspberry chirongwa ichi inoenderera ichikura zvese zviri muhurmware pamwe neramangwana shanduko dzakarongwa uye mumasisitimu anoshanda anoshanda. Zvino batanidza rondedzero LineageOS, iyo inogona kuiswa paRaspberry Pi 3 kuzadzisa yedu inodikanwa SBC bhodhi. Kana iwe wakambofunga nezve kuisa yemahara LineageOS inoshanda sisitimu yemafoni uye mahwendefa pane imwe komputa isiri iyi, ikozvino unogona kuzviita neRaspberry Pi mune yayo yazvino modhi. Kunyangwe ichokwadi kuti iri isiri yemhando vhezheni ...
El Finnish mugadziri Konsta yakaburitsa yekutanga kuvaka iyo LineageOS 15.1 inoshanda sisitimu iyo yaakaratidza kuti inoenderana neaya maARM-based masisitimu ayo Raspberry Pi SoC anovimba nayo. Iyo yakavhurika sosi inoshanda sisitimu inoenderana neGoogle Android Oreo kana Android 8.1 kodhi. Iyo Linux 4.4.119 LTS kernel yakanyorwa neGCC 4.9 yakawedzerwa kwazviri kutsigira urwu rudzi rwekuvaka, pamwe nechengetedzo patches dzakabuda muna Kukadzi wegore rino.
LineageOS ichave yevashandisi vepamberi chete, uye chiteshi ichi chinoshandisa processor Google SwiftShader nekusarudzika, zvinoreva kuti skrini pamwe nekuita kwayo zvinogona kunge zvichikanganiswa. Uye zvakare, iye anovandudza haakurudzire iyi yekutanga muunganidzwa wechero yekushandisa yekushandisa kana yechero chinhu chakanangana nekushandisa kwekurapa, sezvo ichiri chirongwa chisina kusimba, inogona kuve nekugadzikana uye kusimba kwekukanganisa. Asi kune chero kumwe kushandiswa, iwe unogona kuishandisa pasina matambudziko, nekuti haina kukosha ...
Kana iwe uchifarira uyu muunganidzwa weKonsta, unogona kuti uite iyo kubva ku webhusaiti yepamutemo izvo iwe wakazvisarudzira. Iyo faira ingangoita 300MB muhukuru iine mufananidzo ungangoita 4.3GB muhukuru kuinyora pakadhi re SD uye kuiisa muRaspberry PI 3. Ikoko iwe unogona zvakare kuwana rumwe ruzivo uye nhau nezve chirongwa chaKonsta Kang, icho is not Uchakwanisa kuwana chero mirayiridzo yekumisikidza, nekuti haina kusanganisira iyi mhando yezvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » LineageOS ikozvino inogona kuiswa pane Raspberry Pi 3
Mhoro chero nzira yekumisikidza 3.2inch LCD neiyi system ??
Chinyorwa ichi chakabuda riinhi? Inoti "yakatarwa kuchengetedzeka zvigamba zvakabuda muna Kukadzi wegore rino" asi gore ripi? chinhu chacho hachina musi.
Pindura kune yomerito
Kali Linux ikozvino inowanikwa mune yepamutemo Windows 10 chitoro